By ဝေယံအောင်5January 2017
ယခု တပတ် ရန်ကုန်မှာ ကြည့်ရှုလည်ပတ်စရာ ပန်းချီပြပွဲ၊ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲနှင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု သတင်းများ စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ပန်းချီဆရာမ ချူးဝေငြိမ်း၏ Synonym of Self / ကြောင်းတူရုပ်ကွဲ ပန်းချီပြပွဲကို ယောမင်းကြီးလမ်းရှိ Gallery 65 တွင် ၆.၁.၂၀၁၇ မှ ၁၀.၁.၂၀၁၇ အထိ ပြသသွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် အခရိုင်းလစ်ပန်းချီကား ၄၀ ခန့် ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၂။ ပန်းချီဆရာ ၃၀ ကျော်ပါဝင်သည့် ` The GIFTS GROUP SHOW ` ပန်းချီပြပွဲကို ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ Eternal Art Gallery တွင် ၃၁.၁၂.၂၀၁၆ မှ ၂၈.၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် မီဒီယံစုံ၊ လက်ရာစုံ ပန်းချီကား ၅၀ ကျော်ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၃။ ကယ်ရီကေးချား ပန်းချီဆရာ ၇ ဦးပါဝင်သော CARICATURE FESTIVAL MYANMAR 2017 ပန်းချီပြပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံရှိ Summit Art Gallery တွင် ၇.၁.၂၀၁၇ မှ ၁၅.၁.၂၀၁၇ အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် ကယ်ရီကေးချား ၄၀ ခန့်ပြသသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များအား လက်တွေ့သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)မှ ကလေးစာကြည့်တိုက်အစီအစဉ်အဖြစ်`ကာတွန်းအဖော် စာဖတ်ပျော်’ ပွဲတော်ကို ပြည်လမ်းရှိ ၊ အမျိုးသားပြတိုက်တွင် ၆.၁.၂၀၁၇ မှ ၈.၁.၂၀၁၇ အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်တွင် ကာတွန်းဆရာများက လက်တွေ့ကာတွန်းရေးဆွဲသည်အစီအစဉ်များနှင့်အတူ ကလေးများအား ပုံပြောပြခြင်း ၊ ကလေးများကိုယ်တိုင်ပန်းချီရေးဆွဲခြင်း ၊ ဉာဏ်စမ်းအစီအစဉ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၅။ Dancer ခေမီကို ဦးစီးတင်ဆက်မည့် Heroic Dance Performance Show ပွဲကြီးကို မြို့မကျောင်းရှိ အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံတွင် ၇.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲတွင် တေးသံရှင် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ဆုန်သင်းပါရ်၊ ဖြိုးပြည့်စုံ၊ Co Coe တို့က ပါဝင်သီဆို ဖျော်ဖြေသွားမည် ဖြစ်သည်။ လက်မှတ် ဈေးနှုန်းများမှာ ကျပ် ၃ သောင်း၊ ကျပ် ၂ သောင်း နှင့် ကျပ် ၁ သောင်း သတ်မှတ်ထားပြီး မန်းသီရိ တေးသံသွင်း၊ Nobody ဒဂုံစင်တာ ၊ City mart မြေနီကုန်းတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
၆။ ရန်ကုန်တိုင်း ကွန်ပျူတာအသင်းမှ စီစဉ်ကျင်းပသော Rangon ICT Fair 2017 ပွဲတော်ကို ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမတွင် ၆.၁.၂၀၁၇ မှ ၈.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်တွင် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အထူးလျော့ဈေးများဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
၇။ Elephants & Empire Photo Exhibition ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၄ လမ်း ၊ အမှတ် ၄၉ ရှိ Myanmar Deitta တွင် ၇.၁.၂၀၁၇ မှ ၄.၂.၂၀၁၇ အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲရက်အတွင်း တနင်္လာနေ့များ တွင် ပြခန်းပိတ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၈။ LNR-Band Live! ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ပန်းဆိုးတန်းအပေါ်ဘလောက်ရှိ Rose Garden Hotel တွင် ၇.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၇ နာရီတွင် ကျင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲလက်မှတ်များကို www. Theroseyangon.com သို့ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
၉။ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ပြုလုပ်နေကျဖြစ်သည့် `TUESDAY SNIPPETS’ စကားဝိုင်းကို ပန်းဆိုးတန်း အနုပညာ ပြခန်းတွင် ၁၀.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၇ နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၀။ Cat Face Tea Party & Fundraiser ပွဲကို ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ကန်ရိပ်သာလမ်းရှိ The Vibe ဘား တွင် ၈.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၇ နာရီခွဲတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲလက်မှတ်ကို ၇၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖုန်း ၀၉ ၇၇၇၇၇ ၀၆၄၆ သို့ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။